यात्रा परम साहसिक हो तर तपाइँ यसलाई लग-रहित गर्नु पर्छ, layovers लागि विशेष वा यदि बस जर्मनीको मध्ये एक मुक्त दिन लोकप्रिय शहर. हामी तपाईं को लागि आफ्नो मुख्य शहर को तीन जर्मनी मा बायाँ सामान स्थानहरू लागि आवश्यक सबै जानकारी छ, बर्लिन, म्यूनिख, र हैम्बर्ग.
तपाईं उपस्थित हुनुहुन्छ कि म्यूनिख Oktoberfest, बर्लिनमा ब्रान्डनबर्ग गेटको श्रद्धामा उभिए, वा ह्याम्बर्गमा रेपर्बह्न पार्टी पार्टी मा रमाईलो, यी आफ्नो सामान राम्रो तपाईं अन्वेषण गर्दा को हेरचाह हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सजिलो र सबै भन्दा सुविधाजनक तरिकाहरू छन्.
को लकर को आकार मा निर्भर गर्दछ तपाईंलाई, तिनीहरूले बीच €4र €6एक दिन खर्च र अधिकतम भण्डारण अवधि छ 72 घण्टा. तपाईं एक बायाँ सामान कार्यालय भ्रमण रुचि भने, त्यहाँ एक देखि दैनिक खुला छ6छु 10 बेलुका र यो प्रति about about प्रति आइटम हो.
म्युनिकको सेन्ट्रल स्टेशनमा सामानहरू भण्डारण गर्नु तपाईंको लागि एक हावा हुनेछ. त्यहाँ लकर को एक प्रशस्त छ र त्यहाँ सजिलै तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन संकेत हो. एक मानक लकर तपाईं खर्च हुनेछ बारेमा €4प्रति दिन र ठूलो लागि, सुट-मामला आकारको लकर बारेमा €6दैनिक. एक 72 घण्टे प्रतिबन्ध सीमा तथापि छ.
आफ्नो मात्र विकल्प छ Hamburg Airport. बायाँ सामान कार्यालय टर्मिनल छ 2, स्तर 1 प्रस्थान बाट आइतबार यसलाई गरेको खुला सोमवार 4:30 छु 11 बजे. तपाईं बीच €5र € 25 भुक्तानी गर्नेछ, आकार सबै निर्भर. ठूला आफ्नो सामान, उच्च आफ्नो शुल्क, र एयरपोर्टले प्रति आईटम एक पटकको प्रशोधन शुल्कको रूपमा € charge शुल्क पनि लिन्छ.
तपाईं यहाँ आफ्नो सामान सीमित समय फ्रेमका लागि भण्डार गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको आगमनभन्दा पहिले जाँच गर्नु राम्रो हो. तपाईंले पहिले यात्रा गर्न सक्छन् धेरै जानकारी भेला.
यात्रा र सामान भण्डारण गर्दा आवश्यक छ, यसलाई सधैं राम्रो तयार गर्न हो. सबै विवरणहरू डबल-जाँच गर्नुहोस् र एक समाधान खोज्नुहोस् जुन तपाईंलाई उपयुक्त छ र जहाँ तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ. चाहे त्यो विमानस्थलको छ, रेलवे स्टेशन, वा निफ्टी निजी सेवाहरू अनलाइन जाँच गर्दै, यो सबै उपलब्ध बटन को क्लिक मा छ. खुसी सामान र आफ्नो रेल टिकट र प्रयोगमा केही पैसा बचत एक ट्रेन सेव!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “बायाँ सामान स्थान जर्मनी मा कहाँ पाउन गर्न?” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/left-luggage-locations-germany/?lang=ne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
बायाँ सामान म्यूनिख trainjourney Tranride रेल स्टेशन रेल यात्रा ट्राभेलबर्लिन travelgermany ट्राभलह्यामबर्ग